Etu ị ga-esi bugharia vidiyo na gam akporo ngwa ngwa na ngwa ngwa | Gam akporosis
Etu ị ga-esi bugharia vidiyo na gam akporo
Jose Alfocea | | Ngwa gam akporo, Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi
Mgbe ụfọdụ ọrụ ndị kachasị mfe nwere ike bụrụ ihe mgbagwoju anya ịrụ. Ma ọ bụghị kpọmkwem n'ihi nsogbu ya n'onwe ya, mana n'ihi na anyị kwesịrị ịla n'iji ngwa ngwa ndị ọzọ na ngwa maka igbu ya. A) Ee, ihe dị mfe dịka ịtụgharị vidiyo, na nke a n'onwe ya na-eme site na iji ọpịpị na ihuenyo, ọ nwere ike ịbụ ezigbo isi ọwụwa ọ bụrụ na anyị amaghị ngwa kwesịrị ekwesị maka ya.
Ugboro ole ka ị hụla vidiyo na YouTube ma jụọ gị ihe kpatara onye dere ya ji dee ya n'ụzọ kwụ ọtọ? Ugboro ole ka i jiri vidiyo gị dekọọ vidiyo na etiti ndekọ ahụ, ma ọ bụ na njedebe, ị ghọtara na ị na-edekọ ya? Ugboro ole ka egosiri gị vidiyo na WhatsApp ma ọ bụ Telegram ma ọ nweghị ụzọ isi hụ ya na ihuenyo zuru oke na ekwentị gị? Taa na Androidsis anyị ga-enye gị azịza nke nsogbu a na nsogbu ndị ọzọ yiri ya site n'igosi gị nhọrọ nke ngwa na-enye gị ohere ịgbanye vidiyo ọsọ ọsọ, ngwa ngwa na n'ụzọ dị irè.
1 Etu esi gbanye vidiyo na foto Google
2 Video Bugharia
3 Bugharia Video FX
4 Bugharia Video, Bee Video
5 Onye editọ vidiyo: Bugharia, Ntughari, Mgbapu nwayọ, jikota & ọzọ
6 Onye editọ vidiyo: belata vidiyo
Etu esi gbanye vidiyo na foto Google
Anọ m na-akwado atụmatụ a mgbe niile: ọ bụrụ na ị nwere ike ịme ihe ịchọrọ, ị nwekwara ike ime ya nke ọma, yana ngwaọrụ ndị na-abịa n'ụdị ekwentị gị, emela ka nsogbu gị sie ike ma jiri ha. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji bido Google Photos, ngwa m hụrụ n'anya, maka gam akporo na iOS, nke na-enye anyị ohere ịmepụta collages, vidiyo, dezie foto anyị ngwa ngwa na ọtụtụ ndị ọzọ. Ma n'ezie, Iji foto Google anyị nwekwara ike ịtụgharị vidiyo na gam akporo n’emebighị ndụ anyị.
Iji tụgharịa vidiyo na gam akporo site na iji Foto Google, ihe ị ga - eme bụ ịgbaso usoro ndị a:
Họrọ vidiyo ịchọrọ ịmegharị ma metụ ihuenyo ahụ iji bulie nhọrọ vidiyo.
Ugbu a emetụ akara ngosi nke akara ntanetị atọ ị hụrụ na ala iji nweta ngwaọrụ nhazi.
Ugbu a pịa na "ROTATE" nhọrọ ọtụtụ ugboro dị ka mkpa ruo mgbe video bụ na ọnọdụ ị chọrọ ma ọ bụ mkpa.
Chekwaa mgbanwe ndị ahụ site na ịpị "SAVE" n'elu aka nri nke ihuenyo gị.
Ma nke ahụ bụ ya! Ọ dị mfe na ngwa ngwa ahụ. Ọ bụrụ na ama gị dịtụ nso nso a, etinyelarị Foto Google. Ma ọ bụghị, Nwere ike ibudata ya n'efu na Storelọ Ahịa Play site na Google ma si ot youu ah will ga-enwe nkwado ndabere nke foto gi niile na vidiyo enweghị nchekwa. Mana ọ bụrụ na ịchọọ iji Google Photos, gaa n'ihu na-agụ n'ihi na enwere nhọrọ ndị ọzọ anyị ga-egosi gị.
Dị ka a na-achọpụta n'ụzọ doro anya site na aha ya, «Video rotate» bụ ngwa maka gam akporo nke ga - enyere gị aka tụgharịa a video enweghị nsogbu. Ọ bụ ngwa a na-ewu ewu ma na-ewu ewu, n'ihi na ọ na-eme ihe ọ na-ekwe nkwa ma na-emekwa ya nke ọma. Na a mara mma interface kensinammuo na mfe iji, Video Bugharia awade dịgasị iche iche bugharia a video. N'echiche a, ị nwere ọtụtụ akụkụ ịhọrọ site na: 90, 180, 270 na 360 degrees, na ihe a niile. enweghị ọnwụ mma, ma ọ dịkarịa ala na-enweghị ngosipụta ọhụụ mara mma. Na mgbakwunye, ọ na - ejikọ ọrụ ndị a na - ahụkarị n'ikekọrịta na Facebook, Twitter, ịchekwaa na ukwu ma ọ bụ na kaadị micro SD nke ekwentị gị, izipu site na WhatsApp, were gabazie.
Ntugharị vidiyo bụ ngwa elebara anya na mkpa a, na-agbanye vidiyo, ọ bụkwa n'efu, ọ bụ ezie na o nwere mgbasa ozi.
Bugharia Video FX
Ọzọ dị ukwuu ngwa nke ị ga-enwe ike bugharia a video na gam akporo bụ "Bugharia Video FX", dịkwa nnọọ ewu ewu n'etiti ọrụ, dị ka ọ bụ a dị mfe iji ngwá ọrụ nakwa na ọ gbadoro anya na ihe anyị na-eme. Na «Bugharia Video FX» nnọọ na ị họrọ vidiyo ị chọrọ bugharia na pịa adiana (90 degrees, 180 degrees, 270 degrees) ị chọrọ. Ozugbo imechara, ị nwere ike ichekwa na / ma ọ bụ kesaa ya na netwọkụ mmekọrịta gị. Ewoo! Ma obu kwa ngwa efu.
Developer: Bizo Ekwentị
Bugharia Video, Bee Video
Anyị na-agazi ngwa ọzọ ị nwere ike iji bugharia vidiyo site na ogo 90, ogo 180 na ogo 270, ma ọ gụnyekwara nhọrọ nke na-enye gị ohere ọrụ ndozi ọzọ dị ka ewepụtụ vidiyo, mechie ụda ma ọ bụ tinye egwu kachasị amasị gị dị ka soundtrack na ọbụna ịkọrọ ya na netwọk mmekọrịta ma ọ bụ nanị chekwaa ya. Na ihe a niile site na interface nke dịkwa mfe iji.
Onye editọ vidiyo: Bugharia, Ntughari, Mgbapu nwayọ, jikota & ọzọ
Onye Mmepụta nke ngwa a, CodeEdifice, chọrọ ịtụgharị n'isi ya ihe niile ngwa ya nwere ike ịme. Ọ bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ zuru ezu video edezi ngwá ọrụ karịa ndị gara aga anyị nwere ike iji tọghata vidiyo nkịtị iji nwayọ nwayọ ma ọ bụ mee ka ọkpụkpọ ya dịkwuo ngwa, gbakwunye ụda anyị chọrọ na vidiyo anyị, belata vidiyo iji kpochapụ akụkụ achọghị, jikọta ọtụtụ mkpachị n'otu vidiyo, were gabazie. Ma ihe kasị amasị anyị n'oge bụ na «Video Editor: Bugharia ...» na- na-eme ka ọ dịrị anyị mfe ịtụgharị vidiyo na gam akporo enwe ike ịhọrọ 90, 180 ma ọ bụ 270 ogo nke akụkụ site na interface nke, dịka na ngwa ndị gara aga, ga-adị mfe maka onye ọrụ ọ bụla iji.
Onye editọ vidiyo: Bugharia, Ntughari, Mgbapu nwayọ, jikota & ihe ndị ọzọ
Onye editọ vidiyo: belata vidiyo
Anyị na-ekpeghachi ọzọ nchịkọta akụkọ vidiyo zuru ezu maka gam akporo nke anyị ga-enwe ike iji bugharia vidiyo anyị site na 90 ruo 90 degrees. Nanị họrọ anyị video, tinye edezi ngalaba, na pịa na "Bugharia" nhọrọ dị ka ọtụtụ ugboro dị ka mkpa ka ị bugharia video na ọnọdụ ị chọrọ, otu, abụọ ma ọ bụ atọ na na. Mana ọzọkwa na-agụnye ezigbo aka dezie na ịhazi nhọrọ vidiyo, gụnyere ihe karịrị 10.000 obere vidiyo nke ị nwere ike ibudata ma jiri mee ka ndekọ gị, belata, belata ma mebie vidiyo, kpakọkọta mkpachị, gbanwee na mp3, tinye nzacha, emojis na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, see na vidiyo, tinye ederede, na sooo ọtụtụ ndị ọzọ.
Onye na -eme vidiyo na onye nchịkọta akụkọ
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ọtụtụ nhọrọ na-enye gị ohere ịgbagharị vidiyo na gam akporo, site na ngwa a kapịrị ọnụ maka ya, na ndị ọzọ zuru oke na ọkachamara. Choose na-ahọrọ!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu ị ga-esi bugharia vidiyo na gam akporo
Anyị na-akpọ a Leagoo S8
Nweta ego 50% kwụrụ ụgwọ tupu ịre ahịa LEAGOO S8 na LEAGOO S8 Pro